Cunnada 'Scardale' - Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato !! | Cuntada Nutri
Cunnada 'Scardale' waa nooc ka mid ah cuntada khafiifinta ee lagu gartaa miisaan lumis aad u dhakhso badan, sababtoo ah qaadashada kaloriin aad u yar. Waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu da'da weyn tan iyo markii la abuuray oo ay diyaarisay Dhakhtarka Herman Tarnower sanadkii 1970 waxaana la daabacay 1978. Hase yeeshe inkasta oo sanadaha ay jiraan, wali way jirtaa aqbalid badan dadkaas go’aansaday inay miisaanka iska dhuuqaan waqti aad u yar.
Cunnada 'Scardale' waxay ku saleysan tahay fikradda isku-darka borotiinada, karbohaydraytyada iyo dufanka, Saamiyada soo socda ee cunnooyinka maalin kasta la bixiyo: 43% borotiin, 22,5% dufan iyo 34,5% karbohaydraytyo. Sanadihii 70 iyo 80 Cunnadan ayaa si ballaaran loo aqbalay aqlabiyad ballaaran, khataraha ku jira raacitaanka awgeed cunto borootiin aad u sarreeya gabi ahaanba lama aqoon.
Ilaa maanta laguma talinayo in la raaco cunto ay ku badan tahay borotiin, dhaawaca soo gaari kara awgood xanuun kelyaha iyo suurtagalnimada in uu ku dhaco cudur lafaha noocan oo kale ah sida lafo-beel. Xitaa 70-meeyadii, sababo la xiriira waxyeelo muddo dheer ah, khabiirada nafaqada ayaa kugula taliyay in aan iyaga la raacin in ka badan laba toddobaad oo isku xigta.
Marka loo eego saldhigyada cuntadan, qofka go'aansada inuu sameeyo wuxuu waayi karaa qiyaastii 400 garaam maalintii. Waxaa jira oo keliya 3 jeer maalintii, baabi'inta qadada iyo cunnada fudud. Saldhigga cuntadu wuxuu ka kooban yahay miraha, khudradda iyo hilibka caatada ah. Ahaanshaha cunto aad ugu badan borotiinka, qofku wuu wada qanacsan yahay dhifna gaajo ayaa looga tagaa. Dhibaatada ugu weyn ee cuntadan iyo sida ay badanaa ku dhacdo inta badan waxa loogu yeero cunnooyinka mucjisada waa xakamaynta cuntooyin badan kuwaas oo lagama maarmaan u ah koritaanka saxda ah ee jirka.
Astaamo kale oo ka mid ah cunnooyinka 'Scardale' ayaa ah inay kugula talinayso ugu yaraan cabitaanka ilaa 4 koob oo biyo ah maalintii In kasta oo aysan jirin wax xaddidan oo waxa lagu taliyay ay noqon doonaan 8 koob ama laba litir oo biyo ah. Qaadashada dareeraha ayaa faa'iido weyn u leh jirka maadaama ay caawiso si loo baabi’iyo sunta iyo luminta dufanka ururay.
1 Scardale nooca cuntada
2 Cunnooyinka la mamnuucay ee loo ogol yahay cuntada Scardale
3 Faa'iidooyinka cuntada Scardale
4 Cillado soo wajahda cuntada Scardale
5 Video ku saabsan cuntada Scardale
Scardale nooca cuntada
Marka xigta waxaan ku tusi doonaa waxay noqon laheyd menu maalinle ah ku saabsan cuntada Scardale. Sidii aan horayba u sheegay cuntooyinka noocan ah ayaa jira oo keliya 3 cunto maalintii: Quraac, qado iyo casho.
Quraacdu waxay ka koobnaan doontaa kala badh canab ama midho xilliyeed, jeex rooti dhan oo sarreen ah oo aan waxba iyo kafee ama shaah bilaa sonkor.
Cuntada waad qaadan kartaa qaar digaag la dubay oo ay weheliso salad ku labisan qaaddo saliid saytuun ah. Waxaad heli kartaa qayb miro ah 4 jeer usbuucii.
Xaaladda cashada, waxaad dooran kartaa kalluun aan lahayn dufan badan, qaar khudradda duban ama la kariyey kuna raaci qaado qaado oo saliid saytuun ah.
Cunnooyinka la mamnuucay ee loo ogol yahay cuntada Scardale
Si aan kuugu yara caddeeyo waxa ay ka kooban tahay cuntada Scardale, waxaan hoos ku soo qori doonaa waxa ay yihiin cuntooyinka xaaraanta ah ama in aadan qaadan karin xaalad kasta iyo kuwa aad cuni kartid dhibaato la'aan waana la ogol yahay.
Cunnooyinka laga mamnuucay cuntada Scardale waa kuwa ka yimid waxyaabaha ku jira istaarijka sare sida baradhada, cuntooyinka ay ku jiraan dufanka lagu daray sida subagga ama kareemka, inta badan waxyaabaha caanaha laga sameeyo, cabitaanka miraha, aalkolada, macmacaanka ama waxyaabaha macaan.
Sida for cuntooyinka la oggol yahay Iyo inaad ku dari karto cuntada adigoon wax dhibaato ah qabin, waxaa jira khudaar sida karootada, qajaarka, yaanyada, isbinaajka ama broccoli. Waad isticmaali kartaa macaaneyaal halkii laga heli lahaa sonkorta iyo khalka ama xawaashka ayaa lagu dari karaa dharka. Marka laga hadlayo qaadashada borotiinka, waxaad heli kartaa hilib ama kalluun laakiin waa inay noqotaa oo aan lahayn wax dufan ah.
Faa'iidooyinka cuntada Scardale
Cuntooyinka mucjisada badanaa waxay leeyihiin Waxyaabaha wanaagsan iyo kuwa xunba iyo dadka difaacaya iyo kuwa kale ee dhaliila, isla sidaas ayey ku dhici doontaa cunada Scardale. Marka si buuxda ayaa laguu ogeysiinayaa kahor intaadan bilaabin cuntada Scardale, hoosta waxaan ka hadli doonaa taxane ah faa'iidooyin ama faa iidooyin soo raaca cunnadan noocan ah ay kuu keeni karto.
Waa cunto aad heli doonto natiijooyin wanaagsan waqti aad u yar. Haddii aad u baahan tahay inaad miisaankaaga si dhakhso leh u lumiso, waa cunto ku habboon inaad raacdo.
Iyagoo ka kooban cunto lagu sameeyay taxane ah cuntooyin gaar ah, Khasab kuguma aha in aad ku waalatid tirinta kalooriyada alaab kasta ama aad aragto inta ay le'eg tahay cunta kasta oo aad cunayso.
Uma baahnid in lagu daro mid uun nooca jimicsiga ama dhaqdhaqaaqa jirkaHaddii aad raacdo tilmaamaha ay dejisay nafaqada, waxaad waayi doontaa kiilo aad dejisay.
Cillado soo wajahda cuntada Scardale
Sida caadiga ah waxay ku dhacdaa cuntada noocan ah, cuntada aad raaci doonto ma dheelitirna haba yaraatee jidhkuna ma helo dhammaan nafaqooyinka uu u baahan yahay inuu si dhammaystiran ugu shaqeeyo.
Quraac ma siiso nafaqo ku filan ama tamar ay ku bilaabaan maalinta.
Ka kooban kaliya 3 cunno maalintii, waxaad la kulmi kartaa waqti ka mid ah maalintii tamar la'aan, xoogaa tabar daro ama xoogaa gaajo ah.
Sida ay qabaan qaar ka mid ah khubarada nafaqada, cuntadan waa in aan la dheerayn muddo dheer maadaama ay sababi karaan dhibaatooyin caafimaad oo daran sida siyaaday uric acid ama fuuqbax. Intaas waxaa sii dheer, kilyaha si xun ayaa loo gaarsiin karaa ama loo dhaawici karaa.
In kasta oo jimicsiga jidhku caafimaad u yahay jidhka, haddana laguma talinayo, sababtuna tahay nafaqo la'aan iyo kalooriyada yar ee la isticmaalo maalintii oo dhan.
Haddii ay dhacdo inaad go'aansato inaad bilowdo cuntada 'Scardale' waa muhiim taas kahor la tasho dhaqtarka qoyskaaga inay kaala taliyaan haddii ay u keeni karto nooc kasta oo khatar ah caafimaadkaaga.
Video ku saabsan cuntada Scardale
Markaasaan kaa tegayaa muuqaal sharraxaad leh ku saabsan cuntada Scardale si aad wax badan uga sii baran karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cunnada 'Scardale'
Saddex arrimood oo maskaxda lagu hayo ka hor inta aan la xakamayn qorraxda